I-CO2 yama-aquariums, yenzelwe ini futhi kungani iyadingeka? | Okwezinhlanzi
I-CO2 yama-aquariums yisihloko esinemvuthu eminingi futhi inconyelwe kuphela ama-aquarists adinga kakhulu, ngoba ukwengeza i-CO2 ku-aquarium yethu kungathinti izitshalo zethu kuphela (ngokuhle noma ngokubi) kepha nezinhlanzi.
Kulesi sihloko sizokhuluma ngokujulile ngokuthi yini i-CO2 yama-aquariums, anjani amakhithi, ukuthi ungabala kanjani inani le-CO2 esilidingayo ... Futhi, uma ufuna ukucwaninga ngale ndaba, sincoma futhi le ndatshana ku I-CO2 eyenziwe ekhaya yama-Aquariums.
1 Yini i-CO2 esetshenziselwa ama-aquariums
2 Anjani ama-CO2 aquarium kits
2.1 Okuqukethwe kwekithi
3 Ihlala isikhathi esingakanani ibhodlela le-CO2 lama-aquariums?
4 Ungalinganisa kanjani inani le-CO2 ku-aquarium
4.2 Indlela ezenzakalelayo
6 Ingabe kukhona okunye okungathatha indawo ye-CO2 kuma-aquariums?
Yini i-CO2 esetshenziselwa ama-aquariums
I-CO2 ingesinye sezinto eziyisisekelo kakhulu zama-aquariums atshaliwe, ngoba ngaphandle kwayo izitshalo zakho bezizofa noma, okungenani, zigule. Kuyinto ebalulekile esetshenziswe ku-photosynthesis, lapho i-CO2 ihlanganiswa namanzi nokukhanya kwelanga ukuze isitshalo sikhule. Ekuphindaphindeni, ikhipha i-oxygen, enye into eyisisekelo yokuqinisekisa ukusinda nempilo enhle ye-aquarium yakho.
Endaweni yokufakelwa efana ne-aquarium, kufanele sinikeze izitshalo zethu izakhi zomzimba ezizidingayo noma ngeke zikhule kahle. Ngalesi sizathu, i-CO2, evamise ukuthi izitshalo zemvelo zitholakale odakeni lomhlabathi nakwezinye izitshalo ezibolayo, akuyona into egcwele ama-aquariums.
Sazi kanjani ukuthi i-aquarium yethu izodinga i-CO2? Njengoba sizobona ngezansi, kuncike kakhulu enanini lokukhanya i-aquarium etholayo: ukukhanya okukhulu, i-CO2 izitshalo zakho zizodinga kakhulu.
Anjani ama-CO2 aquarium kits
Kunezindlela eziningana zokwethula i-CO2 emanzini akho e-aquarium. Yize kunezindlela ezimbalwa ezilula, esizokhuluma ngazo ngokuhamba kwesikhathi, into esebenza kahle kakhulu ukuba nekhithi enezela ikhabhoni emanzini njalo.
Fluval Fluval Co2 Ikhithi ...
I-Co2 diffuser 3...
I-Fluval CO2 Kit ...
Ngaphandle kokungabaza, inketho enconywe kakhulu ngama-aquarists ngamakhithi we-CO2, ezikhiqiza lo gesi njalo, ukuze ukwazi ukulinganisa ngokunembile ukuthi ingakanani i-CO2 engena emanzini, into izitshalo nezinhlanzi zakho ezizoyazisa. La maqembu aqukethe:
Ibhodlela le-CO2. Kunjalo impela, ibhodlela lapho kutholakala khona igesi. Uma kukhulu, kuzohlala isikhathi eside (kunengqondo). Lapho isiqediwe, kufanele igcwaliswe futhi, ngokwesibonelo, nge-cylinder ye-CO2. Ezinye izitolo nazo zikunikeza le sevisi.
Isilawuli. Isilawuli sisebenzela, njengoba igama laso liphakamisa, ukulawula ukucindezela kwebhodlela lapho i-CO2 ikhona, okungukuthi, yehlisa ukuze ilawulwe kalula.
Umsakazo Isisabalalisi "siphula" ama-bubble e-CO2 ngaphambi nje kokungena ku-aquarium aze enze inkungu enhle kakhulu, ngakho-ke asatshalaliswa kangcono kuyo yonke i-aquarium. Kunconywa kakhulu ukuthi ubeke le ngcezu ekuphumeni kwamanzi ahlanzekile avela kusihlungi, esizosabalalisa i-CO2 kuyo yonke i-aquarium.
Ishubhu elimelana ne-CO2. Le tube ixhuma umlawuli ku-diffuser, yize ingabonakali ibalulekile, empeleni ibalulekile, futhi awukwazi ukuyisebenzisa noma yini, njengoba kufanele uqiniseke ukuthi iyamelana ne-CO2.
I-Solenoid. Ngaphezu kokuba negama elipholile kakhulu elihlanganyela ngesihloko nenoveli kaMircea Cartarescu, ama-solenoids angamadivayisi awusizo kakhulu, ngoba aphethe ukuvala i-valve enikeza i-CO2 lapho kungasekho amahora wokukhanya (ku izitshalo zasebusuku azidingi i-CO2 ngoba azenzi photosynthesize). Badinga isibali sikhathi ukuze basebenze. Kwesinye isikhathi ama-solenoids (noma ama-timers) awafakiwe kuma-CO2 aquarium kits, ngakho-ke kunconywa kakhulu ukuthi uqiniseke ukuthi bayayifaka uma unentshisekelo yokuba neyakho.
Ikhawunta ye-Bubble. Yize kungabalulekile, ikuvumela ukuthi ulawule inani le-CO2 elingena e-aquarium ngempumelelo enkulu, ngoba ikwenza lokho nje, ukubala amabhamuza.
Isihloli sokudonsa. Lolu hlobo lwebhodlela, olungafakwanga kwamanye amakhithi, amasheke futhi akhombisa inani le-CO2 eliqukethe i-aquarium yakho. Iningi linoketshezi oluguqula umbala kuye ngokuthi inani lokuhlushwa liphansi, lilungile, noma liphezulu.
Ihlala isikhathi esingakanani ibhodlela le-CO2 lama-aquariums?
Iqiniso yilokho kunzima ukusho ngokuqinisekile ukuthi ibhodlela le-CO2 lihlala isikhathi esingakanani, ngoba kuzoncika enanini olibekayo ku-aquarium, kanye nobuningi, umthamo ... kodwa-ke, kubhekwa ukuthi ibhodlela elingaba amalitha amabili lingahlala phakathi kwezinyanga ezimbili kuya kweziyisihlanu.
Ungalinganisa kanjani inani le-CO2 ku-aquarium
Iqiniso yilokho akulula neze ukubala iphesenti le-CO2 elidingwa yi-aquarium yethunjengoba kuya ngezici eziningi. Ngenhlanhla, isayensi nobuchwepheshe bukhona ukukhipha ama-chestnut emlilweni futhi. Kodwa-ke, ukukunikeza umbono, sizokhuluma ngezindlela ezimbili.
Okokuqala, sizokufundisa indlela yezandla yokubala ukuthi ingakanani i-CO2 edinga i-aquarium yakho. Khumbula lokho, njengoba sishilo, isilinganiso esidingekayo sizoxhomeka ezicini eziningana, ngokwesibonelo, umthamo we-aquarium, inani lezitshalo ozitshalile, amanzi asetshenziswayo ...
Okokuqala kuzofanela ubale i-pH nobulukhuni bamanzi ukuze wazi iphesenti le-CO2 leyo isemanzini e-aquarium yakho. Ngale ndlela uzokwazi ukuthi imaphi amaphesenti we-CO2 izidingo zakho ezithile ze-aquarium. Ungathola izivivinyo zokubala lawa manani ezitolo ezikhethekile. Kunconywa ukuthi amaphesenti e-CO2 abe phakathi kuka-20-25 ml ngelitha ngalinye.
Ngemuva kwalokho kuzofanele ungeze i-CO2 edingwa ngamanzi e-aquarium (Uma kwenzeka icala, kunjalo). Ukwenza lokhu, bala ukuthi kunamabhamuza angaba yishumi e-CO2 ngomzuzu kulitha ngalinye lamanzi ayi-100.
INICREW CO2 Isilawuli ...
Ngaphandle kokungabaza, le kuyindlela enethezekile yokubala ukuthi inani le-CO2 elikhona ku-aquarium yethu lilungile noma cha. Ngalokhu sizodinga umhloli, uhlobo lwebhodlela lengilazi (elinamathiselwe inkomishi yokudonsa futhi elimiswe njengebell noma i-bubble) elinoketshezi ngaphakathi olusebenzisa imibala ehlukene ukubika ngenani le-CO2 ekhona emanzini. Imvamisa imibala ekhombisa lokhu ihlala ifana: okuluhlaza okwesibhakabhaka ngezinga eliphansi, ophuzi ezingeni eliphakeme, nokuluhlaza okwezinga elifanele.
Ezinye zalezi zivivinyo zizokucela ukuthi uhlanganise amanzi e-aquarium kwisisombululo, kanti kwezinye ngeke kudingeke. Kunoma ikuphi, njalo landela imiyalo yomkhiqizi ukugwema ukwethuka.
Udaba lwe-CO2 kuma-aquariums luyinkimbinkimbi impela, ngoba kudinga ukubekezela, ikhithi enhle ngisho nenhlanhla eningi. Yingakho silungiselele uhlu lwamathiphu ongawacabangela lapho ungena kulo mhlaba:
Ungalokothi ufake i-CO2 eningi ngasikhathi sinye. Kungcono kakhulu ukuqala kancane futhi wakhe amazinga akho ekhabhoni kancane kancane, uze ufinyelele kumaphesenti owafunayo.
Qaphela ukuthi, lapho amanzi ehamba kakhulu (ngenxa yesihlungi, isibonelo) i-CO2 oyodinga kakhulu, ngoba izosuka ngaphambi kwamanzi e-aquarium.
Impela kuzofanele wenze izivivinyo eziningana ngamanzi akwi-aquarium yakho uze uthole isilinganiso esihle se-CO2 lokhu. Ngakho-ke, kunconywa kakhulu ukuthi wenze lezi zivivinyo ngaphandle kokuthi kube nezinhlanzi okwamanje, ngakho-ke uzokugwema ukuzibeka engozini.
Ekugcineni, uma ufuna ukonga i-CO2 encane, cisha isistimu ihora ngaphambi kokuba kucishe amalambu noma kube mnyama, kuzosala okwanele izitshalo zakho futhi ngeke ukuchithe.
Ingabe kukhona okunye okungathatha indawo ye-CO2 kuma-aquariums?
Njengoba sishilo ngaphambili, inketho yamakhithi yokwenza i-CO2 eyenziwe ekhaya yiyona ebaluleke kakhulu izitshalo ezise-aquarium yakho, noma kunjalo, kuyindlela ebiza kakhulu futhi enzima, ayihlali ifaneleka kakhulu kuwo wonke umuntu. Njengokungena esikhundleni, singathola uketshezi namaphilisi:
Indlela elula yokwengeza i-CO2 ku-aquarium yakho yile ukukwenza ngendlela engamanzi. Amabhodlela analo mkhiqizo aqukethe lokho nje, inani lekhabhoni (elijwayele ukukalwa nebhodlela lebhodlela) ngendlela ketshezi okuzodingeka ulingeze emanzini akho e-aquarium ngezikhathi ezithile. Kodwa-ke, akuyona indlela ephephe kakhulu, ngoba ukugxila kwe-CO2, yize kuncibilika emanzini, kwesinye isikhathi akusatshalaliswa ngokulinganayo. Ngaphezu kwalokho, kukhona nalabo abathi kube yingozi ezinhlanzi zabo.
Amathebulethi angahle adinge nemishini ehlukile, ngoba, uma efakwa ngqo ku-aquarium, ahlukana isikhashana esikhundleni sokukwenza kancane kancane, ukuze angazisizi ngalutho izitshalo futhi ashiye izidalwa ezingasala ngenkathi izinsuku ngemuva. Noma kunjalo, kukhona izinketho ezilula lapho umkhiqizo umane wenziwe emanzininokho, kungenzeka zingabhidliki kahle.
I-Aquarium CO2 yisihloko esiyinkimbinkimbi esidinga amakhithi ngisho nezibalo ukuthola isilinganiso esifanele nokuthi izitshalo zethu zikhula zigcwele impilo. Sitshele, unayo i-aquarium etshalwe? Wenzani kulezi zimo? Ngabe ungumlandeli kakhudlwana wamajenerikhi enziwe ekhaya e-CO2 noma ukhetha oketshezi noma amaphilisi?
Fuentes: I-AquariumGardens, UDennerle
Indlela ephelele ye-athikili: Okwezinhlanzi » Izesekeli » I-CO2 yama-aquariums